Hello Nepal News » विश्वको सबैभन्दा महँगो यो घोडा, मूल्य डेढ अर्ब रुपैयाँ !
विश्वको सबैभन्दा महँगो यो घोडा, मूल्य डेढ अर्ब रुपैयाँ !
घरपालुवा जनावर एउटा घोडाको मूल्य कति होला ? नेपालमा बढीमा लाख आसपासमा घोडा पाइन्छ । तर, यहाँ एक यस्तो घोडाको चर्चा गरिँदैछ, जसको मूल्य आममानिसले कल्पनासमेत गर्न सक्दैन होला ।
यो घोडाको मूल्य जति पर्छ, त्यो पैसाले हामी पूरै जीवन बिताउन सक्छौं । आवश्यक सबै कुरा खरिद गर्न सक्छौं । अरू थुप्रै भौतिक आवश्यकता पनि पूरा गर्न सक्छौं ।
यस्तो अचम्मको घोडाको नाम ग्रीनमंकी हो । यो अमेरिकी जातको दौडने घोडा अर्थात् रेस हर्स हो । यो घोडाको मूल्य करिब १ अर्ब ६० करोड नेपाली रुपैयाँ तोकिएको थियो । सन् २००६ मा भएको एउटा लिलामीक्रममा यो घोडा यति धेरै मूल्यमा बिक्री भएको थियो ।
तीव्र गतिमा दौडिने क्षमता तथा सुन्दरता नै यो घोडाको खास विशेषता थियो । यही कारण यो घोडा विश्वमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महँगो जनावरको रूपमा रहेको छ । अर्थात् यसको मूल्यलाई अरू कुनै पनि जनावरले अहिलेसम्म जित्न सकेका छैनन् ।
पहिलोपटक दौड प्रतियोगितामा भाग लिनेक्रममा यो घोडाले २ सय मिटर दूरी जम्मा ९.८ सेकेन्डमा पूरा गरेको थियो । तर, एकपटक गम्भीर रूपमा घाइते भएसँगै यो घोडा त्यसपछि कहिल्यै पनि त्यसरी दौडिन सकेन । सन् २००४ मा जन्मिएको यो घोडाको २०१८ को जुलाई महिनामा मृत्यु भएको थियो ।
प्रकाशित मिति ९ भाद्र २०७६, सोमबार ०९:५८